ပီးလော့စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂရိဒဏ္ဍာရီတွင် ပီးလော့စ် (အင်္ဂလိပ်: Pelops ; ဂရိ: Πέλοψ) သည် ပဲလာ့ပါနီးဆပ်စ်ဒေသ (Peloponnesus) မှ ပီဆာမြို့ဘုရင်ဖြစ်သည်။ဖခင်ဖြစ်သူမှာ တန်းတာလပ်စ်ဖြစ်၍ အေးထရီးယပ်စ်မင်းဆက်ကို တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ အေးထရီးယပ်စ် ဝေါဟာရမှာ ပီးလော့စ်၏ သားအမည်ကို အစွဲပြု၍ ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အိုလင်ပီယာ မြို့တွင် ၎င်းကို ပူဇော်ကြကာ ၎င်းအားကိုးကွယ်ပူဇော်ခြင်းများသည် အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ တည်ထောင်ခြင်း ဒဏ္ဍာရီအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ လာခဲ့သည်။ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသည် ညီညွတ်ခြင်း၏ ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်၍ ပဲလာ့ပါနီးဆပ်စ် မြို့သားများသာမက ဟဲလီးန်ဇ် (Hellenes) မြို့သားများကိုပါ စုစည်းညီညွတ်စေသည်။ အိုလင်ပီယာမြို့၏ ဘာသာရေးနေရာတစ်ခုတွင် အဖျော်ယမကာကို ဒုတိယနေ့ နေ့ပိုင်း၌ ဇုစ်အားမဆပ်ကပ်မီ ပထမရက် ညအချိန်တွင် မြေကြီးပေါ်က ပီးလော့စ်၏ ယစ်ပူဇော်ရာအပေါက်တွင် မျက်နှာမည်းမည်း ပီးလော့စ်အား ဆပ်ကပ်ကြသည်။ (Burkert 1983:96)
၁.၁ တန်းတာလပ်စ်၏ ရက်စက်သော စားပွဲတော်
၁.၂ ဟစ်ပိုဒါမိုင်းယာကို ပိုးပန်းခြင်း
၁.၃ အိုလံပစ် အားကစားပွဲ
တန်းတာလပ်စ်၏ ရက်စက်သော စားပွဲတော်ပြင်ဆင်
တန်းတာလပ်စ်သည် အနာတိုးလိယာဒေသ ဆစ်ပီးလပ်စ်တောင် နယ်မြေမှ ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ အိုလံပတ်တောင်နတ်ဘုရားများကို တင်လှူပူဇော်ချင်သောကြောင့် တန်းတာလပ်စ်သည် ပီးလော့စ်ကို အစိတ်စိတ်ပိုင်း၍ ၎င်း၏ အသားကို ဟင်းလျာလုပ်၍ နတ်ဘုရားများထံ ဆပ်ကပ်ခဲ့သည်။ သမီးဖြစ်သူ ပါဆက်ဖန်နီကို ဟေးဒီးစ်က ခိုးယူသွားသဖြင့် ပူပန်ကြေကွဲနေရှာသော ဒစ်မီးတာသည် မေ့လျော့သွားသောကြောင့် ဆပ်ကပ်သော လှူဖွယ်ကို လက်ခံပြီး ဘယ်ဖက်ပုခုံးကို စားမိခဲ့သည်။ အခြားနတ်ဘုရားများမှာ ထိုဖြစ်ပျက်မှုကို အာရုံခံသိမြင်ခဲ့၍ ကောင်လေး၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို စားသောက်ခြင်းအား ရှောင်ကျဉ်ခဲ့ကြသည်။ တန်းတာလပ်စ်ကို တားတာရပ်စ (ငရဲ) သို့ ပို့ပစ်ခဲ့ပြီးနောက် ပီးလော့စ်ကို ရိုးရာအရ ပြန်လည်စီကာစဉ်ကာပြုပြီး အသက်သွင်းကြရာ ဘယ်ဖက်ပုခုံးနေရာကို ဟစ်ဖီးစတပ် ပြုလုပ်ပေးသော ဆင်စွယ်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့ကြလေသည်။ ကဗျာဆရာ ပင်းဒါက ဤဓလေ့ကို ၎င်း၏ ပထမဆုံး အိုလံပတ်တောင် ရတု (First Olympian Ode) တွင် ဖော်ပြထားကာ အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်မှာ ထိုအချက်ကို 'ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တီထွင်မှု' အဖြစ် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ပီးလော့စ် ရှင်သန်ထမြောက်ပြီးနောက် ပိုဆိုက်ဒန်က ၎င်းကို အိုလံပတ်တောင်သို့ ခေါ်ဆောင်၍ ၎င်း၏ အကူလက်ထောက် ပညာသင်အဖြစ် စေခိုင်းကာ နတ်ရထားမောင်းနည်း သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ နောင်တွင် ဇုစ်သည် ၎င်းတို့၏ နတ်ဩဇာများ အခိုးခံရခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားခြင်များကို သိရှိခဲ့ပြီး ပီးလော့စ်ကို အိုလံပတ်တောင်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။
လူပျိုဖြစ်လာပြီးနောက် ပီးလော့စ်သည် ဟစ်ပိုဒါမိုင်းယာကို လက်ထပ်ချင်မိသည်။ ဟစ်ပို၏ ဖခင်မှာ အိုနိုးမာရောစ့်ဟုခေါ်သော ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်၏။ ထိုဘုရာင်သည် ၎င်းကို ၎င်းသမက်က သတ်မည်ဆိုသော ဟောကိန်းတစ်ခုကို စိုးရွံ့နေ၍ ဟစ်ပိုဒါမိုင်းယာကို ပိုးပန်းချစ်ရေးဆိုသူ (၁၈) ဦးကို သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ သတ်ပုံမှာ ထိုသူများနှင့် စစ်ရထားမောင်းယှဉ်ပြိုင်၍ အနိုင်ရလျှင် သတ်ကာ ထိုဦးခေါင်းများကို နန်တော် သစ်သားတိုင်ကြီးများ၌ ချိတ်ထားပေသည်။ ဂရိခရီးသွား ပထဝီဝင်ဆရာ ပေါဆေးနီးယပ်စ်သည် ဒုတိယရာစုနှစနှောင်းတွင် နောက်ဆုံးဟု ယူဆရသော သစ်သားတိုင်တစ်ခုကို မြင်မိ၍ ပီးလော့စ်သည် ၎င်းမတိုင်မီ အသတ်ခံခဲ့ရသော ပိုးပန်းသူ (၁၈)ဦး၏ အမည်ကို မှတ်တမ်းရေး ကျောက်တိုင်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားထားသည်။
ပီးလော့စ်က လက်ထပ်ရန်အတွက် အိုနိုးမာရောစ့်နှင့် စစ်ရထားပြိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ပီးလော့က ရှုံးမည်က်ု စိုးရိမ်၍ ပင်လယ်နံဘေးသွားကာ ၎င်း၏ အချစ်ဟောင်း ပိုဆိုက်ဒန်ကို တိုင်တည်လေသည်။ ပိုဆိုက်ဒန်ကိုလည်း ၎င်းတို့နှစ်ဦး၏ ချစ်ခြင်း (အဲဖရာဒိုက်တီ၏ ချိုမြိန်သော လက်ဆောင်) ကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ အမှတ်ရစေပြီး ပိုဆိုက်ဒန်ကို အကူညီတောင်ခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ ပိုဆိုက်ဒန်က မြင်ပျံရိုင်းများဆွဲသော စစ်ရထားတစ်စီးကို ဖန်တီးပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။
စစ်ရထားပြိုင်ပွဲဟုဆိုရာ၌ ကွဲပြားသော မူနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမဇာတ်လမ်းတွင် သီယိုပွန်းပါ့စ်က ဤသို့ ဆက်စပ်ပြသည်။ မြင်းများကို ရရှိပြီးနောက် ပီးလော့စ်သည် အိုနိုးမာရောစ်ကို အနိုင်ယူရန် ပီဆာမြို့သို့သွားခဲ့သည်။ လမ်းတွင် ၎င်း၏ စစ်ရထားမောင်းနှင်သူ ဆီးလပ်စ် (Cillus) ကွယ်လွန်၍ အိပ်မက်ပေးခဲ့သည်။ ပီးလော့စ်ကလည်း ဆီးလပ်စ်သေသည့်အတွက် ပရိဒေဝဖိစီးလျှက်ရှရာ အိပ်မက်၌ ဆီးလပ်စ်က ဈာပနပြုလုပ်ပေးရန် တောင်ဆိုခဲ့သည်။ ပီးလော့စ်က အရိုးပြာများကို ခမ်းခမ်းနားနား မြှပ်နှံ၍ သင်္ချိုင်းဂူပြုလုပ်ပေးခဲ့ကာ အပေါလိုကို ရည်ရွယ်၍ ဘုရားကျောင်းဆောင်တစ်ခု တည်ဆောက်သည်။ ဘုရားကျောင်းအမည်ကို အပေါလို ဆီးလိယပ်စ်ဟု အမည်တွင်စေသည်။ ထို၌ ထိုသင်္ချိုင်းဂူနှင့် ဘုရားကျောင်းဘေးတွင် မြို့တစ်မြို့ကို တည်ထောင်၍ ဆီလာ (Cilla) ဟု ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ထိုဘုရားကျောင်းနှင့် မြို့ကို ဟိုးမား၏ အိလိယဒ်ကဗျာ ပထမဆုံးစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားကာ တိကျသောနေရာနှင့်ပတ်သက်သော အကြံပြုချက်များ ပါဝင်သည်။ ထို့နောက် ဆီးလက်သည် သေပြီးသည့်နောက်တိုင် ပီးလော့စ်အား ပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရစေရန် ကူညီဟန်တူခဲ့ပေသည်။
ဒုတိယမူတွင် ပီးလော့စ်သည် ကိုယ်တိုင်ရော ရရှိထားသော မြင်းများနှင့် နတ်ရထား စသည်များက်ု (အနိုင်ရရန်) မရေမရာဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် အိုနိုးမာရော့စ်၏ စစ်ရထားမောင်းသူ ဟားမီးဇ်၏ သား မီတိလော့စ် ကို ၎င်းအား အနိုင်ပေးရန် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည်။ ပီးလော့စ် (သို့) ဟစ်ပိုဒါမိုင်းယာ ကိုယ်တိုင် အိုနိုးမာရော့စ်၏ တိုင်းပြည်တစ်ဝက်ပေးကာ ဟစ်ပိုဒါမိုင်းယာနှင့် ပထမဆုံး တစ်ညအိပ်စက်ခွင့်ပေးမည်ဟူ၍ ကတိပေး စည်းရုံးခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲမစခင်ညခင်းတွင် မီတိလပ်စ်သည် အိုနိုးမာရော့စ် စစ်ရထားကို တပ်ဆင်နေစဉ် ကြေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လင့်ပင် ကို ဘီးနှင့် ဝင်ရိုးကြားမတပ်ဘဲ ပျားဖယောင်းဖြင့် လုပ်ထားသော လင့်ပင်ဖြင့် အစားထိုးတပါဆင်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲစတင်သောအခါ အိုနိုးမာရော့စ်က ပီးလော့စ်ကို မီလာ၍ သတ်ရန် အဆင်သင့်ပြု၏။ ထိုစဉ် ဘီးများပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီး ရထားမှာ ကျိုးပဲ့သွားသည်။ မီတိလပ်စ် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပြီး အိုနိုးမာရော့စ်ကို သေသည်အထိ မြင်းများက ဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားကြသည်။ မီတိလပ်စ်က ဟစ်ပိုဒါမိုင်းယာကို အဓ္ဓမပြုရန် ကြိုးပမ်းခြငါးပြီးနောက် ပီးလော့စ်က မီတိလပ်စ်ကို (ကျောက်ဆောင်စွန်းမှ ပင်လယ်ထဲသို့ တွန်းချ) သတ်ပစ်ခဲ့ပေသည်။
အောင်မြင်မှုရရှိပြီးနောက် ပီးလော့စ်သည် နတ်ဘုရားများကို ကျေးဇူးဥပကာရပြုသောအနေဖြင့် စစ်ရထားပြိုင်ပွဲ၊ ဘုရင် အိုနိုးမာရော့စ်ကို သေလွန်ပြီးနောက် သန့်စင်စေရန်အလို့ငှာ ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဈာပနဆိုင်ရာ အားကစားပြိုင်ပွဲများကို စီစဉ်ခဲ့သည်။ အိုလင်ပီယာမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ထိုဈာပနဆိုင်ရာ ပြိုင်ပွဲမှတဆင့် အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများ၏ အစကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ပီးလော့စ်သည် ကြီးကျယ်သော ဘုရင်၊ ဒေသဆိုင်ရာ သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လာကာ ဂရိတောင်ဘက်ကျွန်းဆွယ်ကို "ပဲလာပါနီးဇ်" (Peloponnese) ဟု ၎င်း၏ အမည်ကို ပေးခဲ့သည်။ ဟစ်ပိုဒါမိုင်းယာကို ဖျားယောင်းခြင်းဇာတ်လမ်းသည် ဟီးဆီယဒ်၏ "သူရဲကောင်းအမျိုးသမီး စားရင်း" (Catalogue of Women) ကဗျာနှင့် အိုလင်ပီယာမြို့၌ ထိန်းသိမ်းပြုလုပ်လေ့ရှိသော ကီးဆယ်လပ်စ်၏ သေတ္တာ(၌ပါသောပုံ) (ဘီစီ ၅၇၀) တွင် ပါဝင်ထည့်သွင်းထားသော်လည်း၊ အိုလင်ပီယာမြို့ ဇုစ်ဘုရားကျောင်းဆောင်၏ မြင်းမိုရ်ပိတ် (ရှေ့မျက်နှာစာ နံရံပုံများ) တွင် စစ်ရထားပြိင်ပွဲများ ပြိုင်ရန် ပြင်ဆင်မှုများအကြောင်းပါရှိသော်လည်း အိုလံပစ်အားကစားများ၌ ၂၅ခုမြောက် အားကစားအဖြစ် စစ်ရထားပြိုင်ပွဲ ထည့်သွင်းသောအခါ (ဘီစီ ၆၈၀) မှသာ အိုလင်ပီယာမြို့တွင် စစ်ရထားပြိုင်ပွဲဒဏ္ဍာရီသည် အရေးပါလာခဲ့ပေသည်ဟု ဗိုက်လ်တာ ဘောကာ့တ် (Walter Burkert) က မှတ်ချက်ပြုသည်။ ဂျီ ဒက်ဗာရူးက ဟစ်ပိုဒါမိုင်းယာကို ဖျားယောင်းခြင်း အကြောင်းကို အီးလစ်ဒေသ၌ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုပိတ်ပင်ထားခြင်းနှင့် ခုနှစ်ရာစုတွင် ကြီးထွားလာခဲ့သော အိုလင်ပီယာမြို့အပေါ် အီးလစ်ဒေသ၏ လွှမ်းမိုးမှုများနှင့် ဆက်စပ်ပြသခဲ့သည်။
↑ Pausanias, Description of Greece, 6. 21. 9–11, withareference to Megalai Ehoiai fr. 259(a).
↑ Pindar, First Olympian Ode. 71.
↑ Cicero, Tusculanae Disputationes 2.27.67 (noted in Kerenyi 1959:64).
↑ Gordon S. Shrimpton (1991)။ Theopompus the Historian။ McGill-Queen's University Press။ ISBN 978-0-7735-0837-8။
↑ Burkert, Homo Necans 1983, p 95f.
↑ G. Devereux, "The abduction of Hippodameia as 'aiton' ofaGreek animal husbandry rite" ''SMSR 36 (1965), pp 3-25. Burkert, in following Devereux's thesis, attests Herodotus iv.30, Plutarch's Greek Questions 303b and Pausanias 5.5.2.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပီးလော့စ်&oldid=622528" မှ ရယူရန်
၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။